Mametraka Rahona ho an’ireo Demokrasia ny Famoretan’i Sina ny Asa Fanaovangazety, hoy ny Mpiambina ny Haino Amanjery · Global Voices teny Malagasy
Mametraka Rahona ho an'ireo Demokrasia ny Famoretan'i Sina ny Asa Fanaovangazety, hoy ny Mpiambina ny Haino Amanjery
Loza mitatao ho an'ny demokrasia ny famoretan'i Sina ny media.
Voadika ny 22 Avrily 2019 16:51 GMT
Vakio amin'ny teny Español, srpski, Italiano, русский, Ελληνικά, English
Sary avy amin'ny RSF.
I Jennifer Creery no nanoratra ity lahatsoratra ity ary navoaka tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 25 Martsa 2019. Naverina navoaka tato amin'ny Global Voices ny dika nasiam-panovàna noho ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Mametraka rahona mivantana ho an'ireo demokrasia maneran-tany ny famoretana ny fanaovangazety ao Sina, hoy ny mpiambina ny fahalalahan'ny asa fanaovangazety Reporters Sans Frontières (Mpanangom-baovao tsy Voasakan'ny Sisintany) tao anatin'ny tatitra navoaka ny 25 Martsa 2019.
Asongadin'io tatitra 52 pejy mitondra ny lohateny hoe ”Ny Fanenjehan'i Sina Rafitra iray Vaovao Maneran-tany Mikasika ny Haino amanjery” io ireo fomba nikatsahan'i Beijing hampihatra ny heriny ara-politika amin'ny haino amanjery iraisam-pirenena mba hanakanana ireo tsikera sy fandrakofana ratsy – miainga amin'ny fanondranana ny maodelin-tsivany any amin'ireo firenena anjakan'ny jadona ka hatrany amin'ny fampanginana ireo mpanohitra amin'ny alalan'ny fampitahorana.
”Ny hiteraka fihetsehana no tanjon'ity tatitra ity”, hoy i Cédric Alviani, talen'ny sampan'ny RSF any Azia Atsinanana, tamin'ny HKFP. ”Mbola ny tendrony kely mipoitra amin'ny bolongan-dranomandry fotsiny ihany amin'ny fifehezan'i Sina ny haino amanjery maneran-tany izao. Izany no mampangoritsina amin'izy ity.”
Manameloka ilay Filoha Sinoa, Xi Jinping ho toy ny ”fahavalon'ny demokrasia, ireo soatoavina maneran-tany, ireo zon'ny olombelona sy ny fahalalahana eo amin'ny asa fanaovangazety” ilay tatitra.
”Anatin'ny fanahy enti-mitondra ao Beijing, tsy natao hanohitra ny mpanao gazety fa hanompo ny fampielezankevitr'ireo fanjakana,” hoy i Christophe Deloire, sekretera jeneralin'ny RSF. ”Raha toa ka tsy manohitra ireo demokrasia, hanafika tsikelikely ireo haino amanjery maneran-tany ny fampielezankevitra amin'ny ”endrika Sinoa”, hifaninana amin'ilay asa fanaovangazety toy ilay efa fantatsika.”
Tanatinà fizaràna iray momba an'i Hong Kong, nilaza ny RSF fa mihapotika tsikelikely ny fahalalahana manao gazety any amin'ny tanàna, mitanisa ireo fifandraisana eo amin'ireo tompon'ny haino amanjery any Hong Kong sy ireo rafi-politika any amin'ny tanibe, ireo rahona avy amin'ny Manampahefana misahana ny Serasera mba hanapahana ireo fahazoandàlan'ny haino amanjery, ary ny fivarotana ny gazety South China Morning Post (amin'ny teny Anglisy) tamin'ny Alibaba, orinasa iray sinoa mivarotra an-tambajotra, tamin'ny 2016.
Nilaza izy io fa taorian'ilay fivarotana,”…teo amin'ny mpiasa miisa 30 teo no niala teo nóho eo. Tsy ela dia nosoloina mpanao gazety malaza ho malefaka na mpomba an'i Beijing izy ireo, ary tsy ela teo dia niova ireo politikan'ny fanontany.”
Mampiditra mpihaino iraisam-pirenena
Nilaza ny RSF fa manondrana ny maodelin'ny haino amanjeriny any amin'ny firenena maro hafa i Sina ho ezaka iadiana amin'ny ”hery Tandrefana fahavalo”, heverina ho toy ny fitaovana fampitam-baovao izay tsy mandrakotra amin'ny endriny tsara ilay firenena.
Manasongadina ireo haino amanjerim-panjakana, dia ny China Global Television Network (CGTN), izay mandefa fandaharana fampahalalam-baovao any amin'ny firenena miisa 140, sy ny China Radio International, izay mandefa fandaharana amin'ny teny miisa 65, ilay tatitra ho porofon'ny kinasan'ilay firenena momba ny haino amanjery maneran-tany.
Nilaza ihany koa izy io fa nampiasa volabe tato amin'ireo firenena Afrikana i Sina tanatin'ny ezaka fampitomboana ny heriny eo amin'ny sehatry ny haino amanjery, indrindra tamin'ny alalan'ireo fandaharana fehezin'ny fanjakana toy ny CGTN Africa izay manalavitra ny fandrakofana manakiana an'i Beijing.
Nanampy ny RSF fa nanasa mpanaogazety vahiny miisa 3.400 fara-fahakeliny, avy amin'ny firenena 146 taminà dia makotrokotroka hanatrika seminera tany Sina i Beijng mba hisarihana fandrakofana tsara.
‘Politikan'ny Cheval de Troie‘
Milaza ilay tatitra fa nametraka ”politikan'ny Cheval de Troie” i Beijing mba hampidirana dokambarotra fampielezankevitra anatin'ireo gazety vahiny izay ahitàna ny Wall Street Journal sy ny Daily Telegraph.
Araka ny tatitra dia tafiditra vao haingana tany anatin'ireo gazety 30 mpivoaka isanandro lehibe indrindra ny China Watch, vaovao iray fanampiny an-gazety amin'ny teny Anglisy tohanan'ny fanjakana, miaraka aminà fivezivezenà dika 13 tapitrisa – ny 1,7 tapitrisa amin'izany dia ao anatin'ny New York Times ary ny 6.6 tapitrisa kosa anatin'ny Mainichi Shimbun.
Ity ambany ity misy sarintany iray mampiseho ny fielezana maneran-tanin'ilay vaovao fanampiny “China Watch” tohanan'ny fanjakana (avy amin'ny mpampiasa Twitter @Fenella Sung):
”Nanao fifanarahana tamin'ny gazety vahiny 30 fara-fahakeliny ny China Daily, ilay gazety amin'ny teny Anglisy tantanan'ny fanjakana – anatin'izany ny NY Times, ny WSJ, WP & UK Telegraph – mba hitondra vaovao fanampiny eo amin'ny 4 na 8 pejy eo antsoina hoe China Watch, izay mety hiseho matetika toy ny isam-bolana’ #propaganda https://t.co/C4exZBAZEX pic.twitter.com/nljqQI5Zvw
Ahitàna ny fampiasambola mavesatry ny firenena eo amin'ny haino amanjery vahiny ireo fomba hafa fampiasan-kery nasongadin'ny RSF, toy ny fandaniana 3,3 lavitrisa Eoro mba hahazoana petrabola amin'ireo haino amanjery Eoropeana isan-karazany.
Tamin'ny Oktobra 2018, azon'ny ny orinasa goavana fampiasambola ao New York ,H&H Group, misy fifandraisana amin'ny Phoenix TV ao Hong Kong tantanin'i Beijing, ny onjampeo Meksikana XEWW 690 izay takatry ny faritra Atsimon'i Kalifornia rehetra – faritra iray ahitàna zanakampielezana Sinoa maro – miaraka amin'ny tanjona hikendrena ilay vondrom-piarahamonina, hoy ny RSF.
Ho fanampin'izany, nilaza ilay ONG fa voarahona ho voaroaka amin'ny tsena Sinoa ireo sehatry ny haino amanjerim-bahoaka raha toa ka tsy manaraka ireo fomba fanaon'ny firenena momba ny sivana, ohatra ny Apple, ilay goavambe Amerikana amin'ny sehatry ny teknolojia, izay niforitra nanoloana ny famoretan'ny governemanta tamin'ny 2018 tamin'ny fanafoanana fampiharana (applications) filokàna ‘tsy ara-dalàna” miisa 25.000 tao anatin'ny tsena Sinoa.
Nanainga ireo orinasan'ny haino amanjery any amin'ireo firenena demokratika ilay tatitra mba hiaro tena amin'ny hery tsy mitsaha-mitombon'i Sina amin'ny famaritana ampahibemaso ireo manana petrabola ao aminy sy amin'ny fampidirana ny votoaty amin'ny teny Sinoa, toy ny AustraliaPlus.cn an'ny ABC.